गरिब दृष्टि: कसरी रोक्न र लडाई रोग
गरिब दृष्टि - यो कि हरेक दिन ग्रह बासिन्दाहरू बीच थप र थप गति प्राप्त छ समस्या छ। यस्तो astigmatism, hyperopia, निकट, मोतिबिन्दु र cataracts रूपमा भन्दा साधारण रोगहरु। र नौ बाहिर दस आँखा रोग को विकासशील देशहरुमा बस्ने मान्छे मा आउँदैन। गरिब दृष्टि4समूह मा कठोरताको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: सामान्य छ, गम्भीर हानि र अन्धो संग नम्र विकार संग दृष्टि।
यस समूहको लागि 15 वर्ष मुनिका 50 भन्दा बढी विकासशील देशहरुमा बस्ने, मान्छे, छोराछोरीलाई मान्छे पनि समावेश छ। विकासशील देशहरुमा, आठ बाहिर दस अवस्थामा रोग निको हुन सक्छ, तर कारण कहिलेकाहीं अन्धो गर्न प्रमुख चिकित्सा ध्यान खोज्दै वा त्यहाँ रोग एक गिरावट छ sipmtomov बेवास्ता, मा ढिलाइ गर्न। मान्छे को 65% छन् दृश्य disturbances दृश्य अङ्गहरूको उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू सम्बन्धित। अक्सर आँखा रोग छोराछोरीको साधारण। रोग तीव्र गतिमा progresses र गम्भीर उल्लङ्घनको जान्छ, तर मद्दत ठीक-ठीक समयमा अपील गरिब दृष्टि निको पार्न एउटा राम्रो मौका छ तिनीहरूले वास्तवमा द्वारा खतरनाक छन्।
सेना जो खराब दृष्टि संख्या छ भन्दा साधारण बीच, रोग केही प्रकारका घटना जवानहरूलाई लागि respite प्रदान गर्दछ। तर यो रंगरुट लागि hyperopia को छैन कम6भन्दा diopters, वा 8 भन्दा कम diopters को निकट ग्रस्त छ।
र अझै, तपाईं गरीब दृष्टि छ भने, के गर्ने?
रोग विरुद्ध लड्न तरिका। आफ्नो फाइदा र बेफाइदा
त्यहाँ दृश्य समारोह वा सुधार गुणस्तर पुनर्स्थापना लागि मानक र वैकल्पिक विभाजित छन् जो विभिन्न तरिकामा छन्।
मानक चश्मा, सम्पर्क लेंस, दृष्टि सुधार लेजर द्वारा समावेश गर्नुहोस्।
प्लस अंक को सादगी र कम लागत छ। तिनीहरूले आँखा लागू छैन, त्यसैले रोगहरु प्रकुपित छैन दर्शनको अङ्गहरूको। यो नकारात्मक धेरै गरिब दृष्टि तिनीहरूलाई लगाउने आवश्यकता छ। चश्मा गलत तरिकाले चुनिएको छ भने, स्नायविक विकारहरु, टाउको दुखाइ र बेहोशी हुन सक्छ।
गरिब दृष्टि राम्रो छ लेंस द्वारा सच्याउनुभयो। आकार र वस्तुहरु को आकार विकृत छैन लेन्सको प्रयोग गर्दा, परिधीय दृष्टि सीमित छैन। तर तिनीहरू (को समाप्ति को मिति पछि प्रयोग छैन, दिन गोली मार, सम्हाल्न) केही हेरविचार आवश्यक गर्छन्। स्थिर लेंस को लगाएका कोर्नियल जलन र राता कारण, त्यसैले हात मा चश्मा छ पक्का हुन सक्छौं।
लेजर सुधार - चाँडै दृष्टि पुनर्स्थापना एक विधि। तर प्रक्रिया पछि नजरमा सूक्खापना, र कहिलेकाहीं सञ्चालन बारम्बार पनि आवश्यकता हुन सक्छ।
वैकल्पिक तरिका फरक अभ्यास, आहार, मनन, मालिश समावेश र यति मा। तिनीहरूले आँखाबाट तनाव राहत मदत, तर सबै जिम्मेवारी स्थिर कार्यान्वयनको अवस्थामा। यो पनि छ pinhole चश्मा, भारी ब्रेक लगान अन्तर्गत भोल्टेज कम छ। तर तिनीहरू सामान्य प्रयोग गर्दा दृश्यको क्षेत्र परिवर्तन छ, binocular दृष्टि deteriorates।
दृश्य हानि को रोकथाम लागि सरल नियमहरू पालन गर्न आवश्यक:
राम्रो प्रकाश (अन्यथा आँखा कडा भोल्टेज छन्) आवश्यक पढ्नुहोस्।
अंतराल, आँखा मांसपेशिहरु (आँखा को परिपत्र आन्दोलनहरु, बारम्बार रङमा पिल पिल, आदि) आराम प्रयोग गर्न अभ्यास प्रदर्शन मा तपाईँको कम्प्युटरको सकेसम्म सानो हुनुपर्छ हुन सुरक्षा चश्मा निगरानी को लागि।
रक्सी, स्टार्च, पीठो, कैफीन को खपत सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
एक घमाइलो दिन घाम लगाउने।
थप ब्लूबेरी (कम्तीमा आधा प्रति दिन ग्लास), गाजर, अंगुर दाख, उत्पादनहरु समावेश भिटामिन K, एक र जस्ता खान्छन्।
दर्शनको दोष। दोष को उपाय
तपाईं आफ्नो हरियो वा नीलो विचार accustomed छन् भने पनि आफ्नो आँखा, हेजेल रंग हो
एक स्वादिष्ट खानाको लागि नुस्खा: कीमा बनाएको टर्की पकाउन के
कसरी थर्मस मा प्रतिरक्षा लागि गुलाब हिप बनाउने?
तपाईंको आफ्नै स्याउ मुरब्बा कसरी बनाउने?
एक लचिलो सापट के हो
बेनेट मिलर: Filmography
"विदेशी Predator पद": तीन storylines को खण्ड